Ithegi: kpi | Martech Zone
I-Lefty: Yenza, Khetha, Yenza kusebenze, kwaye ulinganise i-Instagram Influencers
NgoLwesithathu, Novemba 22, 2017 NgoLwesihlanu, Novemba 24, 2017 Douglas Karr
I-Lefty liqonga lokuthengisa elinempembelelo kwi-Instagram elinceda iimveliso ukunxibelelana nabona baneempembelelo ezifanelekileyo. Ekhokelwa yinjineli yokukhangela kuGoogle yangaphambili, iqela lophuhliso leLefty lisebenze iminyaka emi-2 ukuza kwelona qonga lipheleleyo kubaphembeleli be-Instagram. I-Lefty ivule isoftware yayo kuluntu kwaye iimveliso ezinje ngeShiseido okanye i-Uber sele ziyisebenzisa. Nayi ividiyo emfutshane ebonisa isisombululo. I-Lefty yakha iiprofayili ezichaphazelayo ngokusekwe kwijografi, umdla,
Uhlalutyo lukaGoogle lunokoyikisa kubathengisi abaninzi. Okwangoku sonke siyazi ukuba zibaluleke kangakanani izigqibo eziqhutywa yidatha kumasebe ethu okuthengisa, kodwa uninzi lwethu alwazi ukuba luqale ngaphi. Uhlalutyo lukaGoogle sisixhobo sombane esine-analytically-minder, kodwa sinokufikeleleka ngakumbi kuninzi lwethu. Xa uqala kwiGoogle Analytics, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukophula ii-analytics zakho zibe ngamacandelo alumkileyo. Yenza
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 24, 2014 NgeCawa, ngoFebruwari 9, 2014 Douglas Karr
Sabelane ngee-infographics ezimbalwa kwi-2014-yeNtengiso yeDijithali yokuThengisa kunye noQikelelo, iiNdlela zokuThengisa uMxholo, uLuhlu lweziThengiso lweShishini elincinci kunye noQikelelo lweMidiya yoLuntu. Abantu kwiWebMarketing123 bavavanye abathengisi abangama-500 + malunga neenjongo zabo zedijithali eziphezulu kunye nemiceli mngeni yokufumanisa ukuba yintoni esebenzayo, yintoni engasebenziyo, kunye nezinto abazicwangcisayo ngo-2014.